Angel Di Maria Oo Durba U Digay Kooxdisii Hore Real Madrid: “Paris Saint Germain Ma Ahan Sidii Xilli Ciyaareedkii hore” - Laacib.net
Angel Di Maria Oo Durba U Digay Kooxdisii Hore Real Madrid: “Paris Saint Germain Ma Ahan Sidii Xilli Ciyaareedkii hore”
Garabka Paris Saint Germain Angel Di Maria ayaa shaaca ka qaaday in Real Madrid ay tahay koox mar walba qatarteeda leh sidoo kalana tartanka horyaalada yurub mar walba wacdaro ka dhigta isagoo wareysi siinayay siinayay wariyayaasha kooxdiisa.
Di Maria oo dhawr sano kasoo ciyaaray Santiago Bernabeu ayaa khibradiisa gaarka ah la tagi doona caasimadda walow aan la ogeyn sida uu kaga qeyb qaadan doono, wuxuuna dareensan yahay in Los Blancos ciyaartoydooda markey maqlaan astaanta koobka ay is badalaan dhamaan.
Dhinaca kale Angel Di Maria wuxuu u sheegay Real Madrid in kooxdiisa hadda ee Paris Saint Germain ay tahay mid ka xoogan sidii sanadkii hore taasoo ka dhigan iney leedahay awood ay ugu yaraan ku reebi karaan difaacdayaasha tartanka.
“Waan ka xooganahay xilli ciyaareedkii hore” ayuu yiri Angel Di Maria oo la hadlayay website-ka rasmiga ah ee kooxdiisa Paris Saint Germain.
“Waxaad u baahan tahay xirfad dheeraad ah markaad kulankaan oo kale ciyaareysid”
“Sidoo kale waxaad u baahan tahay inyar oo nasiib ah si aad guul u gaarto”
Dhanka kale Angel Di Maria wuxuu aaminsan yahay in dhibaatada ka heysata kooxdiisii hore La Liga aysan aheyn mid ku xiran Champions League, marka tartankaan la joogana ay leeyahiin qatartooda gaarka ah.
“Real Madrid waa koox weyn, mar walbana bandhig cajiib ah ayey ka muujiyaan Champions League” ayuu yiri Di Maria.
“Marka ay maqlaan astaanta tartanka (Champions League-ga) ciyaartoyda wey is badalaan waxeyna soo bandhigaan qaabka ugu fiican”
“Gabi ahaanba waa tartan ka badalan midka horyaalka”
Lugta hore labada kulan ee wareega 16-ka wuxuu 14-ka February ka dhici doonaa Santiago Bernabeu, halka lugta labaad bilowga Maarso la isugu tagi doono Parc des Princess.
kaafi yare 13-02-2018 at 4:12 pm -
force barcelona 13-02-2018 at 4:10 pm -
hhh war xaar madrid meel haysgeyso sanadka viva neymar jr waa lacib kalaacibsan ronaldo zxpayaal weynu sugi kulankaanna insha allaaaah…
Abdiwaasac Hussein 13-02-2018 at 8:57 am -
Marka ay noqoto Champion Real Madrid waa tan marwalba Ugu cadcad,taas oo Ay qireen CIYARTOYDA heerka calami ah…